Ukufunda kwelinye ilizwe eJamani | Iinkqubo eJamani | Isifundo eYurophu 2022
Ukufunda kwelinye ilizwe eJamani | Iinkqubo eJamani | Isifundo eYurophu
Esi sisikhokelo sabafundi bamazwe aphesheya abafuna ukufunda phesheya eJamani nakwabafundi baseKhaya eJamani banokufumana ukuba luncedo kakhulu.
Kule nqaku ndiza kubonisa ezinye izinto ofuna ukuba nazo ukufundisisa kwamanye amazwe eJamani ngempumelelo. Kuhlala kunqabile ukuphumelela kuyo nantoni na eyenziwayo ngaphandle kocwangciso olulungileyo ke ukuba uyafuna ukufundisisa phesheya eJamani kuya kuba kuhle ukuba unoluvo olulungileyo lokuphatha.
Ukufunda eJamani kunokuba lithuba elihle lokufumana umbono omtsha, ocacileyo waseJamani kwizifundo zakho.
Ukufunda phesheya kweendawo kwiindawo ezininzi ezinkulu zaseJamani kunokubonelela ngokufikelela kwiinkqubo zokufunda ezintsha kunye namava. Umzekelo, abafundi kwiindawo ezahlukeneyo banokunxibelelana neenkampani ezimanyeneyo zaseYurophu, basebenze neengcali zembali, okanye batyelele iindawo zomculo ezidumileyo njengenxalenye yeeklasi zabo.
Kwangelo xesha, unokufikelela kumathuba okuhamba ngokulula ukuze ubone ngakumbi iJamani.
Ngenkqubo yoololiwe edibeneyo, abafundi banokuhamba malunga neJamani kwaye basebenzise ithuba lembali etyebileyo kunye nenkcubeko nanini na xa behlaselwa yimvakalelo.
Yintoni yokufunda kwiJamani
Ngokudlulileyo kwimbali yaseJamani kunye nokuzibandakanya kwiindlela zehlabathi zamva nje, uluhlu olubanzi lwabafundi banokufumana amathuba emfundo afanelekileyo.
Oku akunakuphucula kuphela ukuqonda kwakho kweyona nto iphambili, kodwa ikwabonelela ngeekhredithi zokuthweswa isidanga.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iikhosi zinokuqhutywa ikakhulu ngesiNgesi. Nangona kunjalo, iiklasi zesiJamani zinokufumaneka. Oku kunokufuna ukuba abafundi bagqibe ikhosi ethile yolwimi ngaphambi kokuba babhalise.
Ndifanele ndifunde phi kwelinye ilizwe eJamani?
IJamani ineendawo ezininzi zembali nezexesha langoku apho abafundi banokulandela khona izifundo zabo. Umzekelo, abafundi banokufunda kwezinye zezi ndawo zilandelayo.
Ezi ziindawo ezimbalwa apho unokufunda khona eJamani. Nganye inezibonelelo ezizodwa ezinokubakho. Ukuze ufunde okungakumbi ngezinye zezi ndawo, sebenzisa ibha yemenyu ukucoca ngedolophu. Qiniseka ukuba uthetha ngeenkqubo ezinokubakho malunga neendawo ezikhoyo.
Funda kwelinye ilizwe eJamani Iingcebiso
Fumana ukupasa kaloliwe! Inkqubo kaloliwe yaseJamani ibanzi. Kwaye, ngamaxabiso etikiti labafundi, kunokuba yindlela efikelelekayo yokubona ilizwe.
Amaqondo obushushu eJamani anokuhlala emnene unyaka wonke. Akukho sidingo sokupakisha iisuti zokuhlamba okanye iipaki, ibhatyi ekhanyayo inokuba ilungile.
NgeeCawe, abafundi abaninzi baseJamani babuyela emakhaya bayokuchitha ixesha neentsapho. Isikolo sakho sinokubonakala ngathi siyidolophu enesiporho, kodwa ngoku lixesha lokuxhoma kunye namanye amazwe. Okanye, buyela ekhaya nabanye oontanga bakho baseJamani.
Endaweni yeemvavanyo rhoqo, iiklasi zaseJamani zifuna iimviwo zomlomo. Endaweni yokuxinanisa iimpendulo zakho ephepheni, ungathetha ngazo noonjingalwazi bakho. Oku kunokuba yinto engaqhelekanga kubafundi bamanye amazwe, ke cela unjingalwazi wakho akuncede.
Ixabisa malini ukufunda kwelinye ilizwe eJamani?
Iiyunivesithi zabucala zixhaswa ngemali kuphela kwiifizi zezifundo kwaye ngenxa yoko ezi ziphezulu kakhulu. Kungenzeka, ukuba abafundi kufuneka bahlawule I-20,000 yeeYuro ngonyaka.S
Ukusukela ekuphelisweni kweefizi zezifundo kuzo zonke iiyunivesithi zikarhulumente zaseJamani ngo-Okthobha u-2014, kukho umrhumo wokomfuziselo obizwa ngokuba ngumrhumo wesemester oshiyekileyo ukuba uhlawulwe.
Kutheni ufunda kwelinye ilizwe eJamani
IJamani yindawo yesithathu ethandwa kakhulu phakathi kwabafundi bamanye amazwe kwihlabathi. Ngaphezulu kweepesenti ezilishumi elinambini zabafundi kwiiyunivesithi zaseJamani ezivela phesheya- njengawe.
IJamani yindawo enomtsalane yokufunda kunye needigri zaseyunivesithi zaseJamani zihlonitshwa kakhulu ngabaqeshi kwihlabathi liphela.
Indlela yokufunda kwelinye ilizwe eJamani
Ukuba unomdla wokwazi ukuba ungafunda njani na phesheya eJamani jonga kula manyathelo angezantsi;
Khetha eyunivesithi. Ke, uthathe isigqibo ngeJamani njengofundelo lwakho lwangaphandle-ngoku lixesha lokuba ukhethe ikhosi efanelekileyo kunye neyunivesithi.
Jonga iimfuno zokwamkelwa.
Fumana iimali zakho ngokulandelelana.
Thatha i-inshurensi yezempilo.
Fumana i-visa yabafundi baseJamani.
Fumana indawo yokuhlala.
Ukufaka isicelo sokufunda phesheya eJamani kulula njengokuba ucinga.
Unga jonga iphepha lethu lokufunda ukufaka isicelo sokufunda ezininzi ezikhoyo eJamani.
IMFUNDOisifundoFUNDA KWELINYE ILIZWEFunda kwelinye ilizwe eJamanikufunda e Yurophukufunda eJamaniFunda kwelinye ilizwe
Post Previous:Isifundo eRussia | Iinkqubo eRashiya | Isifundo eYurophu
Okulandelayo Post:Ufunda njani kwelinye ilizwe ngokulula